Pyae Phyo (MMiTD): ♪ ကျပ်27000 မှ 55000 အထိ Discount ရှိမယ့် HP အထူးပရိုမိုးရှင်း
♪ ကျပ်27000 မှ 55000 အထိ Discount ရှိမယ့် HP အထူးပရိုမိုးရှင်း
HP Cash Back Promotion
➡️ 15.9.2017 နေ့အထိ
😍 HP Discount 27000 မှ 55000 ထိ
😍 Eastern Discount 10US မှ 30US ထိ
➡️ Game များထည့်သွင်းပေးခြင်း ၊
(1) HP X360 11-ab028(Touch Screen)
(2) HP Pavilion 14-am093TU
Discount ချပြီးဈေးနှုန်း 379US (515,000Ks)
(3) HP Pavilion 14-am112TX
Discount ချပြီးဈေးနှုန်း 459US (624,000Ks)
(4) HP 15-ay119TX
Cash Back=> 30us
Discount => 15US
(5) HP X360 13-U106TU (Touch)
500GB / 4GB DDR4
13.3'' Touch Screen
WebCam, WiFi, BT,3Cell Battery.
<3 Window 10 License
ဈေးနှုန်းကတော့ မူလရောင်းဈေး (625US)
Discount ချပြီးဈေးနှုန်း 615US (836,000Ks)
Touch Screen ကို Performance ကောင်းကောင်းနဲ့အသုံးပြုချင်သူများအတွက် သင့်လျောက်ပါတယ်။
Discount ချပြီးဈေးနှုန်း 520US (707,000Ks)
(8) HP 14-AL133 TX
1TB HDD / 4GB DDR4
14'' LED / WiFi /Webcam, BT
ဈေးနှုန်းကတော့ မူလရောင်းဈေး (619US)
Discount ချပြီးဈေးနှုန်း 599US(814,000Ks)
နောက်ဆုံးပေါ် Core i5 ကို Nvidia Graphic နဲ့ 14'' LED အ၇ွယ်နဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးသုံးချင်သူများအတွက် အဆင်ပြေပါတယ်။
(9) HP Pavilion 15-AU 170TX
15.6'' LED / WebCam
WiFi , Bluetooth,3Cell Battery.
ဈေးနှုန်းကတော့ မူလရောင်းဈေး (639US)
Discount ချပြီးဈေးနှုန်း 624US (848,000Ks)
Core i5 7th Gen Cpu နဲ့လိုက်ဖက်ညီစွာ 2GB Graphic ပါဝင်တာမို့ AutoCad , 3D Max , Retvit စတဲ့ Engineering လုပ်ငန်းသုံးများနဲ့ Dota2လို 3D Game တွေဆော့ဖို့အဆင်ပြေစေပါတယ်။
(10) HP Pavilioin 15-au173TX
Discount ချပြီးဈေးနှုန်း 694US (943,000Ks)
(11) HP Spectre 13-V114tu
Eastern 3) (လှိုင်)တိုက်အမှတ်(51/B1)(အခန်း 001)၊ ရန်ကုန်အင်းစိန်လမ်းမကြီး။ ဘူတာရုံမှတ်တိုင် နှင့် သုခမှတ်တိုင်ကြား ၊ ဟိန္ဒူ ဘုရားကျောင်းမျက်စောင်းထိုး။ ဖုန်း 01-516115 , 09-969 773 107 ,09-778096333